संघीयताले विदाको लागि साइत कुरेर बसेको छ : चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता) | Nepalvani
संघीयताले विदाको लागि साइत कुरेर बसेको छ : चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)
भदौ ४, २०७७, ८:०८ PM
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संघीयताले नेपालबाट विदाई हुने साईत कुरेर बसेको सनसनीपूर्ण टिप्पणी गरेका छन् । उनले संघीयता आएपछि आम मान्छेलाई खान र लगाउन दुःख भएन भन्नु भ्रम मात्रै भएको पनि आरोप लगाए । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रस्तुत छ अध्यक्ष तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री केसीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोराना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार कत्तिको सफल ? सरकारले राम्रो काम गरेको छ, जनतामा ?
सरकारले जनताका आवश्यकता पूरा गरेको छैन ।
अनि जनताका प्रतिनिधिहरूले काम गरेका छन् कि छैनन् ? संघीय सरकारले त गरेन । प्रदेश सरकारले कति गरेको छ ?
सबैलाई थाहा छ नि ।
संघीयता त अहिले हाम्रो देशमा सञ्जीवनी बुटि भएको छ ?
संघीयता भएपछि मान्छेलाई खान, लगाउन दुःख भएन भन्नु भ्रम हो ।
गाउँपालिकामा सबै जनताले सुविधा पाएका छन् भन्ने करा छ । नगरपालिका, प्रदेश सरकारमा त्यस्तै छ । प्रदेश सरकारको प्रशंसा गर्छन्, जनताले ?
सत्तामा लागेका र सत्ताको पछाडि दौडनेहरूले पञ्चायत शासनमा, प्रजातन्त्रमा सत्ता र शक्ति भएका सबैले सुविधा पाएका छन् । सुविधा नपाएको त सर्वसाधारण जनताले न हो ।
तपाईले संघीयताको विरोध गर्दागर्दै पनि हाम्रो देशमा संघीयता संस्थागत भयो । ३ तहको सरकार छ, देशमा । के भन्नुहुन्छ ?
संघीयताले विदाको लागि साइत कुरेर बसेको छ ।
कहिले विदा होला संघीयता हाम्रो देशमा ?
जिल्ला र प्रदेशमा सेवा सुविधा बढाउने र पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउन सजिलो भएको छ । त्यसैले संघीयताले आफु विदा हुने साइत कुरेर बसेको छ ।
संघीयता भनेको हाम्रो देशको लागि वरदान भईसक्यो, संस्थागत भईसक्यो ?
अरबमा टिकट काटेर कुरेर बसेका, भारतमा नेपालीहरू कयौँ यातनाहरू खपेर बसेकालाई थाहा होला, संघीयता । शक्तिमा बसेर जनताको समस्या समाधान नगर्ने अनि संघीयता सफल भयो भनेर भनेका छन् ।
संघीयताले गर्दाखेरि यसपालि कोरोनाको विपत्तिमा राम्रो काम गर्न सकियो भनेका छन् ?
एउटा हेलिकप्टर लगेर काम चल्नेमा ४/५ ओटा हेलिकप्टर लगेर गए । त्यहाँ जनतालाई चामल पुगेको छैन । त्यसकारण जनताले थाहा पाएका छन्, संघीयताको परिणाम के भएको छ भन्ने कुरा ।
हाम्रो देशमा संघीयता नभएको भए यस्तो अवस्था आउँथ्यो कि समस्या कसरी समाधान हुन्थ्यो ?
संघीयताकै कारणले यहाँ कोरोना डराइरहेको छ । संघीयताले भ्रष्ट्राचारीहरू पनि अत्यन्तै डराएका छन् । विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरूले मोजमज्जा गर्न पाएका छन् । त्यसकारण संघीयताबाट सबै डराएका छन्, थाहा पाएका छौँ हामीले ।
जनताका जनप्रतिनिधिहरू सेवा सुविधा लिनमा नै मस्त, व्यस्त छन् ?
सबैलाई त नभनौँ तर कतिपय मान्छेहरूलाई कोहीलाई के को रन्को, घरज्वार्इलाई खानकै रन्को भनेको जस्तै यस्तो नेपाली जनतालाई आपतविपत परेको बेलामा प्रशस्त फाइदा उठाउने, कमिशन खाने, यी सबै कुरा त नेपाली जनताले देखिरहेका छन् ।
अब निषेधाज्ञा आवश्यकत्ता छैन, जनता भोकभोकै मर्ने अवस्था आईसक्यो : डा. दिक्षित
दाइजोले छुट्टयाएको प्रेम